Sida Shaqo Looga Helo Paxful
Sida loogu biiro xalka dhaqaalaha ee P2P
Waxaan keliya ka dhignaa hanaanka shaqaalaysiinta mid fudud oo toosan sida ugu macquulsan, anagoo haddana xaqiijinayna in wada sheekaysi ku filan la siiyo labada dhinacba si loo helo sawirka buuxa ee maslaxada dhinacyada:
Waxa ugu wayn ee aad xasuusnaanayso waa maslaxada dhinacyada, waxaan doonaynaa inaan ku xaqiijino inaad ku faraxsanaan doonto doorkaaga aadna marto waraysigeeda taas badalkeeda, ay ugu fiican tahay inaad adiggu go'aansato inay tahay shaqo kugu haboon iyo inkale.
Aan wada sheekaysano
Waan kusoo wici doonaa. Kani waa fursadaada aad nagu tusayso waxa aad taqaano aadna jeceshahay
Noosheeg sida xirfadahaaga iyo kartiyadaadu ay door ugu yeelan karaan shaqada guud ee shirkadeena.
Tijaabi shaqada laguu dhiibay
Waxaa la joogaa waqtigii aad na tusi lahayd waxaad samayn karto.
Waxaad la kulmi doontaa shaqaale kula mid ah si loo dhamaystiro bilaabida shaqada.
Yabooha iyo qandaraaska
Kuso dhawoow shirkada Paxful!